Nifandona ny polisy kaominaly sy ny mpivarotra amoron-dalana : niely ny feo fa nisy nikasa handoro ny lapan’ny Tanàna Analakely | NewsMada
Nifandona ny polisy kaominaly sy ny mpivarotra amoron-dalana : niely ny feo fa nisy nikasa handoro ny lapan’ny Tanàna Analakely
Nahery vaika kokoa ny fifandonana teo amin’ny mpivarotra amoron-dalana sy ny polisy kaominaly teny Analakely, teo anoloan’ny lapan’ny Tanàna omaly. Nandeha be ny feo fa misy andian’olona mikasa handoro ny lapan’ny Tanàna. Voatery niditra an-tsehatra ny Emmo/Reg sy ny polisy …
Nisavorovoro teny Analakely omaly, teo anoloan’ny lapan’ny Tanàna, noho ny fifandonana teo amin’ny polisy kaominaly sy ny mpivarotra amoron-dalana. Nanala ireo mpivarotra vao maraina ireo polisy kaominaly sy ny mpiasan’ny tsena, kanjo tsy nety niala tamin’ny toerany, teo amoron-dalana eo Analakely ny mpivarotra maromaro. Nifanenjana teo ny roa tonta, ary niafara tamin’ny fifampikasihan-tanana izany. Nobatain’ny polisy kaominaly niditra ny vavahadin’ny Lapa ireo olona efatra, nahitana vehivavy roa. Io fihetsika io no nanaitra ireo mpivarotra amoron-dalana efa anjatony ka nirohotra teo anoloan’ny lapan’ny Tanàna.
Raikitra ny tabataba, horakoraka teo anoloan’ireo polisy kaominaly sy ny mpiasan’ny tsena. Nifanenjana teo ny tady teo amin’ny roa tonta, ary tao anatin’ny fotoana fohy, nivoaka ny sora-baventy sy ny kiririoka nentin’ireo mpivarotra amoron-dalana.
Nisy ihany koa ny nitora-bato tamin’izany, ary niely vetivety ny feo fa hisy handoro ny lapan’ny Tanàna. Nampitomboina ny fiarovana ny Lapa, ary kamiaoben’ny mpamonjy voina miisa efatra naiditra tao an-toerana, ankoatra ireo 4×4 an’ny Emmo/Reg sy ny polisy maromaro. Rakotra mpitandro filaminana nanao fisafoana manodidina an’Analakely.
Niditra an-tsehatra tao anatin’ny fotoana fohy ihany koa ny mpitandro filaminana. Tonga teny an-toerana ny polisy nahitana ny Uir, ny Emmo/Reg. Naparitaka ireo mpivarotra amoron-dalana izay efa nifangaro tamin’ny olon-tsotra nitangorona. Voatery nanapoka grenady mandatsa-dranomaso ny mpitandro filaminana nanaparitahana ireo olona marobe. Tapaka tanteraka ny lalana teny an-toerana.
Efa tamin’ny 12 ora sy sasany vao niverina tamin’ny laoniny ny fiainana teny Analakely. Efa navotsotra avokoa ireo olona efatra nosamborina.
Misy ny mpanararaotra
Amin’ny trangan-javatra tahaka ny niseho omaly, maro ny mpanararaotra. ”Misy ny mpanararaotra mikasa handroba ary efa misy ny fepetra noraisina amin’izany”, hoy ny polisy niasa teny an-toerana. Nikatona avokoa ireo mpivarotra teo amin’ny manodidina noho ny tahotra ny fandrobana. Nahatazana andiana tovolahy mitangorongorona ihany koa teny an-toerana. “Hitanay ireny olona ireny, fa raha vao tonga ny Emmo/Reg, niala avy hatrany izahay sao mifangaro eo”, hoy ny tovolahy mpivarotra amoron-dalana iray.
Hitohy anio ny fitandroana ny filaminana, izay mety hafampana noho ny fisian’ny hetsika politika hiseho anio.